वैत्यश्वर केन्द्रका लागि पाडुलामा स्थानीयले जग्गा दान गरे - Awajonline Online Newspaper
वैत्यश्वर केन्द्रका लागि पाडुलामा स्थानीयले जग्गा दान गरे
दोलखा, ९ असोज
बैतेश्वर गाउँपालिका वडा न. ६ स्थित पाण्डु डाँडामा गाउँपालिका केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीयहरुले बैतेश्वर पालिका मार्फत नेपाल सरकारका नाममा निःशुल्क जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्न शुरु गरेका छन् । सोमबार मात्र स्थानियहरुले ३० रोपनी भन्दा बढी जग्गा गाउँपालिका मार्फत सरकारका नाममा निःशुल्क रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएका हुन् ।
सबैलाई पाएक पर्ने आकर्षक पाण्डु डाँडामा गाउँपालिका केन्द्र राख्दा सबै वडाहरुलाई केन्द्र पर्ने तथा यसबाट गाउँपालिकाको समग्र विकासमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको आफूहरुले निःशुल्क सरकारका नाममा जग्गा पास गरिदिएको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नं छ का कुमारप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनले ७६० बर्ग मिटर जग्गा सरकारकाना ममा रजिष्ट्रेशन गरिदिएका छन् ।
यस्तै साँढे २ रोपनी जग्गा पास गर्नै बैतेश्वर ५ का खेमराज भट्राई पनि गाउँपालिका केन्द्र राख्न जग्गा दान गर्न पाएकोमा आफूलाई खुशि लागेको बताउँछन् । कुमार प्रसाद धिमिरे, खेमराज भट्टराई लगायत १६ जनाले मालपोत कार्यालय चरिकोटमा नेपाल सरकारको नाममा निःशुल्क जग्गा पास गरिदिएका छन् । उनीहरु पाण्डु डाँडा आसमासमा आफूसँग रहेको नम्बरी जग्गामध्ये पच्चिस प्रतिशतसकारलाई गाउँपालिका केन्द्र राख्न निःशुल्क पास गरिदिएका हुन् ।
वैत्यश्वर गाउँपालिका वडा नं. ६ पदमप्रसाद दाहालले सोमबार मालपोत कार्यालय दोलखामा आएर वैत्यश्वर गाउँपालिकाको नाममा ४ रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिए । पदमप्रसादसँगै आएको उनका भाई कृष्णबहादुर दाहालले २ रोपनी गाउँपालिकालाई दिए ।
दाहालहरु जस्तै सोमबार मालपोत कार्यालय दोलखामा आएर वैत्यश्वर ६ साविक नाम्दू गाविस ४ का १६ जनाले ४० रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा निशुल्क जग्गा दान गरेका हुन् । गाउँपालिकाको नाममा नाम्दू ६ पाडुलाडाँडामा रहेको जग्गा स्थानीयहरुले दान गर्नेमा दिलबहादुर दाहालले सबैभन्दा बढी ८ रोपनी उपलब्ध गराएका छन् ।
गाउँपालिका केन्द्र बनाउँनका लागि स्थानीयहरु खुशी भएर गाउँलेहरु नै आफू आएर चाहिए जति लिन जग्गाधनी पूर्जा नै गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा र उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यलाई जिम्मा लगाएका छन् । स्थानीयले ७० रोपनी जग्गा गाउँपालिका केन्द्रका संरचना निर्माणका लागि दान गर्न लागेका हुन् । गाउँपालिका प्रमुख छवि लामाले बाँकी जग्गा पनि चाँडै रजिष्ट्रेसन पास हुने बताए ।
‘३० रोपनी जग्गा एकै दिन आइतबार गाउँपालिकाको नाममा प्राप्त भयो’ उनले भने ‘केही व्यक्तिहरुले लालपूर्जा दिइसक्नु भएको छ, तर आफ्नो व्यस्तताले आउन सक्नु भएन दसैं लगत्तै पास हुन्छ ।’ स्थानीय तहको पुर्न संरचना गर्दा जिल्लास्तरीय सुझाव समितिले नाम्दूको पाडुलामा केन्द्र राख्ने सिफारिस गरेको थियो । पछि पुर्न संरचना आयोगले सिमित व्यक्तिको प्रभावका आधारमा काब्रे गाविस भनेर आयो । स्थानीयको भावना र पायक पर्ने केन्द्रको रुपमा आफू निर्वाचित भएपछि पाँडुलामै केन्द्र राख्ने निर्णय भएपछि स्थानीयहरु खुशी भएर जग्गा दान गरेका हुन् ।
पाँडुलाको सरकारी मूल्याङ्न प्रतिरोपनी ३८ हजारदेखि ७८ हजारसम्म छ । तर स्थानीयस्तरमा प्रतिरोपनी ४ लाखसम्म किनबेच भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यले स्थानीयले दान गरेको जग्गा गाउँपालिकाको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रयाप्त हुने बताए । यदि काम गर्दै जाँदा जग्गा नपुग भएमा सिमानामा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई पनि प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
पाडुलामा २५ जनाको ४५५ कित्ता जग्गा रहेको छ । जग्गाधनीसँग रहेको ७५ प्रतिशत जग्गा आफूसँग राखेर २५ प्रतिशत गाउँपालिकाको नाममा पास गर्ने स्थानीयहरुले स्वयम् निर्णय गरेका छन् । कोही कसैको जग्गा २५ प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउनका लागि प्रयोग गर्न पास गर्नु पर्ने भएमा पछिल्लो घेरामा रहेका जग्गाधनीले सट्टा पास गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् ।
वैत्यश्वर ६ का पुण्यप्रसाद घिमिरेले आफ्नो जग्गा केन्द्रलाई दान दिने ठाउँमा नपरेपछि पछाडीको जग्गा पास दान गर्नेहरुलाई पास गर्न आएको बताए । केन्द्रको जग्गा दान दिन र पछाडीको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि स्थानीयको छुट्टा–छुट्टै समिति बनेको छ । गाउँपालिकाको नाममा जग्गा दान गर्नेहरुलाई ७५ प्रतिशत जग्गा पछाडीको जग्गाबाट पु¥याउने हाम्रो सहमति भएको उनले बताए ।
पुर्न संरचना आयोगले गाउँपालिका केन्द्र जहाँ तोके पछि छ महिनाभित्र गाउँ सभाको बैठकको निर्णयबाट उपयुक्त ठाउँमा सार्न सकिने व्यवस्था भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । जग्गा प्राप्त भइसकेकाले आफ्नो पुरानो बाचा अनुसारै गाउँसभाबाट चाँडै पाडुलामा केन्द्र बनाउने निर्णय गर्ने बताए ।
केन्द्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताए । गाउँपालिकाको संरचनाका लागि २१ वटा भवन बन्ने उनले बताए । मालपोत अधिकृत अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारका नाममा जग्गा पास हुने भएकाले कुनैपछि शुल्क मालपोतले नलिएको बताए ।